बधाई ! विश्वकै विजेता बनिन् ७ बर्षकी नानी अभिजीता, राखिन् विश्व कीर्तिमान…हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
भारतकी एक बालिकाले विश्व कीर्तिमान बनाएकी छिन् । यदि कसैले तपाइँलाई ७ बर्षको बच्चाले के–के गर्न सक्दछ ? तपाइँ के जवाफ दिनुहुन्छ ? स्पष्ट रूपमा तपाईले भन्नुहुनेछ पढाई–लेखाई, नाचगानलगायत सामान्य काम गर्न सक्छन् ।”
तर यदि तपाईंलाई थाहा हुन्छ कि ७ वर्षको बच्चाले सम्पूर्ण पुस्तक लेखे भनेपछि तपाईं पत्याउनुहुन्छ ? यो कुरा विश्वास गर्न तपाईंलाई गाह्रो हुनसक्छ । तर सत्य हो, भारतको गाजियाबादकी एक ७ वर्षकी बालिकाले आफ्नो प्रतिभाले सम्पूर्ण विश्वलाई चकित बनाएकी छिन् ।”
उनले अन्तर्राष्ट्रिय बुक अफ रेकर्डमा विश्वको सबैभन्दा कान्छो लेखकको रूपमा आफ्नो नाम दर्ता गरेकी हुन् । यस सानो लेखकको अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि धेरै चर्चा भइरहेको छ ।”
हो, त्यस उमेरमा जब अभिभावकहरूले बच्चाहरूलाई पढ्न र लेख्न सिकाउँदछन् । त्यो उमेरमा अभिजीता गुप्ताले एउटा पुस्तक लेखेर उनको अभिभावकको नाम चर्चामा ल्याएकी छिन् । एशिया बुक अफ रेकर्ड्सले उनलाई ‘ग्रन्थ’मास्टर इन राइटि’ भन्ने उपाधि प्रदान गरेको छ ।”
उनी कविता लेख्ने सबैभन्दा कान्छी लेखक हुन् । अभिजीताको पुस्तक ‘ह्याप्पीनेस ल एराउन्ड’ मा छोटो कथा र कविताहरूको संग्रह छ । उनले यो किताब बच्चाहरूको लागि लेखेको किताब हो ।”
दुई कक्षाकी विद्यार्थी अभिजीताले ५ वर्षको उमेरदेखि लेख्न शुरू गरेकी थिइन् । तर उनले लकडाउनको क्रममा धेरै रचनाहरू लेखेकी हुन् । अभिजीता भन्छिन् कि उनको वरिपरिका साना कुराहरुले उनलाई प्रेरणा दिन्छन् ।
शब्दहरु अनुवाद त्यो के सुन्छ, देख्छ र महसुस गर्छ । उनले मदर अर्थ, स्टडी इज माय बेस्ट बडी, लेट्स ट्राई, लेट्स फ्लाई जस्ता धेरै कविता लेखेका छन् ।”
अभिजीताका बुबा आशीष गुप्ता चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र आमा अनुप्रिया गुप्ता इन्जिनियर हुन् । उनीहरु दुबैलाई आफ्नो सानो परीको उपलब्धीमा गर्व भएको पनि बताएका छन् ।
अभिजिताको पुस्तक ‘ह्याप्पीनेस एल वर्राउन्ड’ अजेय प्रकाशनहरू द्वारा प्रकाशित गरिएको हो । दुबै यसको हार्ड प्रतिलिपि र किन्डल संस्करण उपलब्ध छन् । चाँडै नै उनको महामारीको समयमा अनुभवहरुमा आधारित एक पुस्तक प्रकाशित हुँदैछ ।”
Prevईश्वर पोखरेल अब गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री ?
Nextसाढे दुई महिनामा ७६ बालबालिका उ’द्धार गर्ने प्रहरी अधिकृत सीमाको सर्वत्र चर्चा, प्रमोशन पनि पाइन्…हेर्नुहोस् ।